Ngwa | December 2019
Ntughari nhazi nke TP-Link
N'agbanyeghị ntakịrị obere na imepụta ihe dị mfe, ụdị ngwaọrụ dịka onye na-ahụ maka redire dị nnọọ mgbagwoju anya site n'echiche nke igwe. Ma nye ọrụ dị mkpa nke onye na-ahụ maka redire kpebiri n'ụlọ ma ọ bụ na ọfịs, ọrụ dị mma dị ezigbo mkpa maka ndị ọrụ. Nrụrụ ọrụ nke onye na-arụ ọrụ na-eduga ná njedebe nke arụmọrụ nkịtị nke netwọk mpaghara site na ntanetị arụmọrụ na ikuku.
Ịhazi TP-LINK TL-WR702N rawụta
TP-LINK TL-WR702N onye na-ahụ maka wired wireless dị na akpa gị ma n'otu oge ahụ na-enye ezigbo ọsọ. Ị nwere ike hazizi onye rawụta ka Intanet na arụ ọrụ na ngwaọrụ niile n'ime nkeji ole na ole. Ntọala Mbụ Ihe mbụ ị ga-eme na onye ọ bụla router bụ iji chọpụta ebe ọ ga-eguzo maka Intaneti ịrụ ọrụ ọ bụla n'ime ụlọ.
Ụdị Njikọ VPN
Ọ na-eme na maka ọrụ Ịntanetị, ọ bụ iji jikọọ netwọk netwọk na kọmpụta, ma mgbe ụfọdụ ọ na-achọ ime ihe ọzọ. A na-eji PPPoE, L2TP na PPTP ejikwa ya. Ọtụtụ mgbe, ISP na-enye ntụziaka banyere otu esi hazie ụdị ihe ntanetịime, ma ọ bụrụ na ị ghọtara ụkpụrụ nke ihe dị mkpa ka hazie, ị nwere ike ime nke a na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụla rawụta.
Ngwaọrụ Huawei HG532e bụ onye nrụzi modem na ọrụ ọrụ nke ọma: njikọ na onye na-eweta site na cable ma ọ bụ akara ekwentị, ntanetị site na Wi-Fi, na nkwado maka IPTV. Dịka iwu, ọ dị mfe ịmepụta ụdị ihe ndị ahụ, mana ụfọdụ ndị ọrụ ka nwere nsogbu - a na-ezube ntuziaka a iji dozie nsogbu ndị a.
Meewanye ngwa Ịntanetị na modem Yota
Onye na-ahụ maka Cellar Scartel, nke na-arụ ọrụ n'okpuru aha a na-akpọ Yota, mara ogologo oge nke ndị ahịa. Ụlọ ọrụ a, n'etiti ihe ndị ọzọ, na-enye ohere ịnweta Internet ọsọ ọsọ site na USB-modems. Yota na-ewu ụlọ ọrụ ọhụrụ, na-agbasawanye mkpuchi netwọk ya ma na-ebute ụkpụrụ nhazi data ọhụrụ, gụnyere LTE.
Ịhazi onye na-eweta redire D-Link DIR-300
Mgbe ịchọtara onye na-enye ihe ntanetị, ọ ga - ejikọrọ ya ma mezie ya, naanị mgbe ahụ ọ ga - arụ ọrụ ya niile n'ụzọ ziri ezi. Nhazi na-ewe oge kachasị elu ma na-ewetakwa ajụjụ site n'aka ndị ọrụ na-enweghị uche. Ọ bụ na usoro a ka anyị ga-akwụsị, ma weghaara onye ntanetị nlereanya DIR-300 site na D-Link dị ka ihe atụ.
Hazie TP-Link TL-WR740n rawụta
TP-Link TL-WR740n onye ntanetị bụ ngwaọrụ e mere iji nye ohere ịnweta Internet. Ọ bụ n'ogo oge a Wi-Fi rawụta na a 4-ọdụ ụgbọ netwọk igwefoto. N'ihi nkwado nke nkà na ụzụ 802.11n, ọsọ ọsọ netwọk ruo 150 Mbps na ọnụ ọnụ ọnụahịa, ngwaọrụ a nwere ike ịbụ ihe dị oké mkpa mgbe ị na-ekepụta netwọk n'ụlọ, ụlọ aka ma ọ bụ obere ụlọ ọrụ.
Ịtọlite ​​ihe ntanetị elu
ỌZỌ dị iche iche na mmepe nke netwọk akụrụngwa. N'ime ndepụta nke ngwaahịa ha, e nwere ọtụtụ ụdị ndị na-eme njem na-ewu ewu na ọtụtụ ndị ọrụ. Dị ka ọtụtụ ndị na-agagharị agagharị, a na-ahazi ngwaọrụ nke onye ọrụ a site na ntanetị pụrụ iche. Taa, anyị ga-ekwu n'ụzọ zuru ezu banyere nhazi onwe nke ngwaọrụ dị iche iche iji hụ na ọrụ ha ziri ezi.
Chọọ maka nọmba modem Yota
Ejiri ngwaọrụ ndị dị mfe na ndị a pụrụ ịdabere na ya site n'aka ndị ọrụ ha. Enwetara, tinye n'ime ọdụ ụgbọ USB nke kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ nkeonwe, nwere ike ịnweta Ịntanetị ngwa ngwa ma chefuo ngwaọrụ ahụ. Mana kwa ọnwa ị ga-akwụ ụgwọ maka ọrụ nke onye na-enye gị, na maka nke a, ị ga-ama nọmba nọmba modem gị.
Ịhazi TRENDnet router
Onye ọ bụla na-agagharị agagharị na-enweta ọganihu. Ihe ngwọta a na-eme ka ngwaọrụ ụlọ niile dịrị n'otu netwọk, nyefe data ma jiri Intanet. Taa, anyị ga-aṅa ntị na ndị njem site na ụlọ ọrụ TRENDnet, gosi gị otu esi abanye nhazi nke ngwá ọrụ ndị ahụ, ma gosipụta n'ụzọ doro anya usoro nke ịtọ ha maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị.
Ịtọ ntọala nchekwa na Mikrotik router
Ndị na-eme njem na Mikrotik bụ ndị na-ewu ewu ma na-arụ ọrụ na ụlọ ma ọ bụ ọfịs maka ọtụtụ ndị ọrụ. Nchekwa nchebe nke ịrụ ọrụ dị otú ahụ na-ahazi firewall. Ọ na-agụnye usoro nke njigide na iwu iji chebe netwọk sitere na njikọ mba ọzọ na hacks.
Na-egbukepụ TP-Link router
Ngwaọrụ ọ bụla, dị ka ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ siri ike, na-eji nchekwa nchekwa na ngwaọrụ ntanetị, nke dị mkpa maka mmalite, nhazi na ọrụ nke ngwaọrụ ahụ. N'ebe a na-emepụta ihe, onye ọ bụla na-ahụ maka redire nwere ihe ọhụrụ nke BIOS mgbe a tọhapụrụ ya, ruo mgbe ụfọdụ isi ngwaọrụ a jupụtara na ya zuru ezu iji mee ihe ziri ezi na ọnọdụ dị iche iche.
Ịhazi ZyXEL Keenetic Extra Router
Nhazi ziri ezi nke ndị na-eme njem nlegharị maka iji ụlọ mee ihe bụ idezi ụfọdụ mpaghara site na ngwa ngwa. Enwere arụzi ọrụ niile na ngwaọrụ ndị ọzọ nke rawụta. N'isiokwu taa, anyị ga-atụle ngwá ọrụ netwọk ZyXEL Keenetic Extra, bụ nke dị mfe ịtọlite.
Otu esi eme ka mgbaàmà nke router Wi-Fi mụbaa
Njirimara nke mgbaàmà na onye ntanetị Wi-Fi na-anapụta adịghị adị mgbe niile ma dị ike. Ngwaọrụ abụọ nwere ike ọbụna n'ime obere ụlọ, ọkwa nke ike ikuku nwere ike ịhapụ ọtụtụ ihe ọ ga-achọ. Enwere ọtụtụ ihe kpatara nsogbu ndị dị otú ahụ, ma ọzọ, anyị ga-enyocha n 'uz o zuru ezu iji kpochapụ ha.
Nhazi nke onye ntanetị D-Link DIR-320
Ndị na-enweta ngwaọrụ netwọk na-echekarị mkpa iji hazie onye rawụta. Ihe isi ike bilitere karịsịa n'etiti ndị na-enweghị ọkachamara bụ ndị na-emebeghị usoro yiri nke ahụ. N'isiokwu a, anyị ga-egosi n'ụzọ doro anya otú ị ga-esi gbanwee router gị onwe gị, ma nyochaa nsogbu a site na iji ihe atụ nke D-Link DIR-320.
Ọnụ mmiri na-emeghe na ZyXEL Keenetic routers
Ụlọ ọrụ ZyXEL na-arụ ọrụ dị iche iche na netwọk, na ndepụta nke ndị na-ahụkwa ụzọ. A na-ahazi ha niile site na ihe dịka ngwa ngwa, ma n'isiokwu a, anyị agaghị atụle usoro dum n'ụzọ zuru ezu, mana ga-elekwasị anya na ọrụ nke ọdụ ụgbọ mmiri.
Antenna maka modem na-eme ya n'onwe gị
Ọtụtụ n'ime anyị anọwo na-enwe obi ụtọ iji ụdị ngwaọrụ dịka modems sitere na ndị na-arụ ọrụ cellular, nke na-enye anyị ohere ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ zuru ụwa ọnụ. Ma, ọ dị mwute na, n'adịghị ka netwọk arụmọrụ na netwọk, ụdị ngwaọrụ nwere ọtụtụ ihe ndabara dị ịrịba ama. Isi ihe bụ atụmatụ nke mgbasa ozi redio na oghere gbara ya gburugburu.
Esi hazie ASUS RT-N14U rawụta
Ngwa netwọk bụ ebe dị mkpa na ngwaahịa ASUS. A na-ewepụta ihe ngwọta ego na nhọrọ ndị ka elu. Onye ntinye RT-N14U bụ akụkụ nke ikpeazụ: na mgbakwunye na arụmọrụ dị mkpa nke onye ntanetị isi, enwere ike ijikọ na Ịntanetị site na modem USB, nhọrọ nke ohere dịpụrụ adịpụ na diski mpaghara na nchekwa igwe ojii.
Anyị na-ekesa Wi-Fi na laptọọpụ
Teknụzụ Wi-Fi na-enye gị ohere ịnyefe data dijitalụ dị mkpirikpi n'etiti ngwaọrụ wirelessly thanks to channel radio. Ọbụna laptọọpụ gị nwere ike ịbanye na ebe ikuku ikuku site na iji manipulations dị mfe. Ọzọkwa, Windows nwere ngwaọrụ a wuru ewu maka ọrụ a.
Ịhazi nhazi okporo ụzọ ndị Beeline
Tinyere Ịntanetị site n'aka ndị ọrụ ndị ọzọ, ndị ọrụ na-ejikarị ngwá ọrụ na ọrụ na Beeline. N'okpuru isiokwu a, anyị ga-akọwa otu ị ga-esi hazie onye na-ahụ maka redio maka ọrụ siri ike nke njikọ Ịntanetị. Ịtọlite ​​onye nhazi redio taa, naanị ụdị ndị na-eme njem ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ ntanetị emelitere arụ ọrụ na netwọk Beeline.